यशोदा राई काठमाडौं, १९ जेठ
जीवनमा दुई व्यक्ति खास हुन्छन् । पहिलो बुबा । दोस्रो आमा । यी दुई जसले आफू हारेर पनि सन्तानका लागि खुसी दिलाउँछन् । बुबा र आमा नै जीवनको पहिलाे पाठशाला हो ।
लकडाउन काठमाडौं । कोरोना भाइरसको डर र त्रास । कोठाबाट बाहिर निस्कन पाएको छैन । साँझको समय थियो । सोलुबाट आमाको फोन आयो । हतार–हतार फोन उठाएँ । अघिपछि भन्दा आमाको मलिनो स्वर । आमाको बोलीले प्रस्ट हुन्थ्यो । आमा आपतमा छिन् ।
‘के भयो ?’ पूरा प्रश्न गर्न नपाउँदै आमा बोल्न थालिन् । ‘बुबा बिरामी ।’ आमाले यति भन्दै गर्दा मेरो शरीर भारी भइसकेको थियो । मुटुको चाल तीव्र गतिमा चल्न थाल्यो ।
‘ओहो ! के भयो त बुबालाई ?’
‘डायबिटिजको समस्या । खुट्टामा सानो घाउ थियो । बढेर ठूलो भयो । स्थानीय अस्पतालमा पनि देखाएको, ठीक भएन । घाउ बढेर ठूलो भएको छ । के गर्ने ?,’ आमाले लामो सुस्केरा हाल्दै भनिन् ।
त्यहाँ उपचार सम्भव नभएपछि काठमाडौं ल्याउने निर्णय गरियो । ल्याउन त ल्याउने, तर कसरी ? लकडाउन छ । आवातजावत गर्न पाइँदैन । एउटै विकल्प भनेको एम्बुलेन्स हो । गाउँमा अंकल आन्टी सबैले सल्लाह गरेर एम्बुलेन्सबाट बुबालाई काठमाडौं ल्याइयो ।
नयाँ वर्षको पहिलो दिन । १ वैशाख । वर्षको पहिलो दिनले नै मनलाई शान्ति दिएन । बुबालाई के हुने हो ? मनमा अनेक प्रश्न र तर्कना कुदिरहन्छ । १ गते बुबालाई काठमाडौंको टिचिङ अस्पताल लग्यौँ । खुट्टामा बुबाको घाउ । खुट्टा बेस्सरी फुलेको । त्यो देख्दा मन नै चसक्क घोच्ने ।
अस्पतालले बुबालाई भर्ना गरेर उपचार सुरु गरियाे । औषधि चलाउन थालियो । अब त बिस्तारै निको हुन्छ भन्ने आशा जाग्न थाल्यो । हरेक क्षण कामना गर्थें । बुबालाई छिटो निको होस् । बुबाले अस्पतालको शय्याबाट ऐया भन्दा पनि म आत्तिन्थेँ । त्यसैले बुबालाई छोडेको थिइनँ । कतै निस्किएँ भने पनि मेरो मन अस्पतालमै हुन्थ्यो । त्यसैले अस्पतालामा धेरै समय म नै बसेको थिएँ । बुबालाई छोडेर बस्न मनले मानेन ।
घाउ बढ्दो छ । कतै बुबाको खुट्टा नै गुमाउनुपर्ने त होइन भन्ने चिन्ता र डर पनि उत्तिकै छ । डाक्टरलाई सोध्यो । ठीक हुन्छ भन्ने जवाफ आउँछ ।
डाक्टरले ठीक हुन्छ भनेपछि मन केही हलुको हुन्थ्यो । बुबाको सुगर कम नभएकाले अप्रेसन गर्न समस्या भयो । घाउ निको भएको थिएन । केही सुधार भने हुँदै थियो । एक हप्तापछि एलपीआरएफ गर्ने समय लिएर १९ वैशाखमा डिस्चार्ज भयौँ ।
अस्पताल जाने आउने क्रम चलिनै रहयो । ३१ वैशाखमा एलपीआरएफ गरेर घर फर्कियौँ । बुबालाई टिचिङमा राखेको साथी भाइ र आफन्तलाई थाहा थियो ।
१ जेठ १ का दिन बिहान एक जना दाईको फोन आयो । ‘टिचिङमा कोरोना संक्रमित भेटिएछ नि,’ ती दाइले फोनमा भने ।
त्यो पल आफ्नोभन्दा पनि बुबाको चिन्ता भयो । कतै सरेको रहेछ भने के हुने हो । बुबा सुगरको बिरामी । बुबा र काकाले सम्झाउनुहुन्थ्यो, ‘केही हुन्न । हामी कतै गएको छैन । वनको बाघले खाओस् कि नखाओस्, मनको बाघले चाहिँ खाएको हो भनेर ।’
त्यसपछि समाचार बुझ्न थालेँ । आफैँ सञ्चार माध्यममा काम गर्ने भएकाले यो हो टेलिभिजन र रेडियो काठमाडौंमा बुझेँ ।
यदि मलाई पनि लागेको रहेछ भने अरुलाई पनि सर्छ भनेर अफिस पनि गइनँ । त्यसपछि बुबा र म होम क्वारेन्टाइनमै बस्यौँ ।
३ जेठमा अर्को समाचार आयो । धुलिखेलमा एक सुत्केरी महिलाको कोरोनाका कारण मृत्यु । टिचिङमा सुत्केरी भएर घर गएको भन्ने समाचार आउन थाल्यो । त्यो समय हामी पनि टिचिङमै थियौँ । यता बुबा बिरामी । कतै हामीलाई पनि सरेको त छैन ? पीडामाथि पीडा थपियो । के गर्ने कसो गर्ने ? भावशून्य भएँ । ज्वरो नै आयो । औषधि खाएर त्यो राति तन्द्रामै बिताए ।
सरकारले पनि कोराेनाका कारण सुत्केरी महिलाको मृत्यु भएको पुष्टि गर्‍यो ।
बुबालाई फेरि त्यही अस्पतालमा लैजानु छ । होम क्वारेन्टाइन बस्ने कि अस्पताल जाने भन्ने दोधार भयो । टिचिङ सिल भएको भन्ने समाचारहरू पनि आइरहेका छन् । अस्पताल नगए बुबाको घाउ निको हुँदैन । अस्पताल जाऊँ कोरोना भाइरसको डर र त्रास । कस्तो बिपत आइलागेको ? आफूले आफूलाई नै प्रश्न गर्थें ।
अब के गर्ने भनेर सोच्न थालेँ । अस्पतालमा फोन गरेँ । टिचिङको बर्न वार्डमा सिस्टरसँग फोनमा कुरा गरेँ ।
‘टिचिङ सिल भएको हो ?,’ सिस्टरलाई सोधेँ ।
‘खुल्लै छ,’ सिस्टरको उत्तर थियो ।
‘एलपीआरएफ गर्न आउनुपर्ने छ, डर लागेको छ, के गर्ने ?,’ मैले भनेँ ।
मेरो कुरा नसकिँदै सिस्टरले भन्नुभयो, ‘कहाँ सिल हुनु ? सुरक्षित छ । सुरक्षित भएर आएपछि केही हुन्न । बाहिर हल्ला भएजस्तो छैन । तपाईं आउनुहोस् ।’
जहाँ दिनरात काम गर्ने डाक्टर नर्स त निर्धक्क भएर काम गरिरहनुभएको छ । म किन डराउने ? सिस्टरको बोलीले केही राहत मिल्यो । अघिसम्म डराएको मनमा आत्मबल पनि आयो । धन्य सिस्टर !
७ जेठमा टिचिङ गयौँ । सधैं ब्यस्त हुने सडक । लकडाउनले शान्त । तर, कोरोनाले मन भने अशान्त थियो । बुबालाई लिएर अस्पताल गएँ । अस्पतालमा डाक्टर र नर्सले हौसला दिनुभयो । डाक्टर नर्सको बोलीले औषधिको नै काम गर्‍यो । त्यसैले त डाक्टरलाई भगवान् भनिएको हाेला । जसको मीठो बोलीले पनि आधा रोग निको हुन्छ ।
अप्रेसन अगाडि बुबाको आरडीटी गर्न अस्पतालले भन्यो । फेरि अर्को समस्या आयो । कहाँ गएर गर्ने ? बुझ्न थालेँ । टेकुमा आरडीटी किट सकिएको रहेछ ।
१४ जेठ टिचिङमै पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्न स्याम्पल दियौँ । १६ गते रिपोर्ट नेगेटिभ आयो । त्यसपछि हप्तौँदेखिको डर र त्रास दूर भयो । कोरोनाको डर र त्रास मलाई मात्र होइन, अरुलाई पनि छ । तर, कोरोनाभन्दा पनि अन्य रोग लागेमा अस्पताल जानसमेत मान्छे डराउन थालेका छन् । त्यसैले जब रिपोर्ट नेगेटिभ आयो । त्यसपछि अस्पताल जाँदैमा कोरोना सर्दैैन भन्नेमा ढुक्क भएँ ।
बुबाको उपचार सकिएको छैन । अस्पताल कति दिन धाउनुपर्ने हो, थाहा छैन । त्यसैले अझै के–के देख्न र भोग्न बाँकी नै छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ १९, २०७७, ११:५०:००